James Swan oo ku wajahan magaalada Kismayo xilli ay xiisad ka taagan tahay arrinta doorashada |
James Swan oo ku wajahan magaalada Kismayo xilli ay xiisad ka taagan tahay arrinta doorashada
Wafdi uu hoggaaminayo wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda gaaraan xarunta maamul-goboleedka Jubbaland oo la qorsheynayo in maamaha soo socda ka bilaabanto doorashada madaxweyne iyo midda baarlamaanka maamulkaasi.
Wadiga Swan ayaa waxaa qeyb ka ah xubno ka socda beesha caalamka, kuwooda daneeya arrimaha Soomaaliya.
Wafdiga ayaa waxaa la filayaa inay la kulmaan Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo Xubnaha musharixiinta mucaaradka,iyada oo Kismaayo ay haatan ku jirto xaalad la xiriirta doorashooyinka Guddoonka Baarlamaanka iyo tan Madaxweynaha.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ee arrimaha Soomaaliya Amb. James Swan oo safarkaan uu noqonayo kii labaad oo uu ku tago Kismaayo ayaa wararku waxaa ay sheegayaan in madaxda Jubbaland uu kala hadli doono arrimaha doorashooyinka iyo tabashada ay qabaan musharixiinta qaarkood.
Horay magalada Kismaayo waxaa u tagay wafdi ka socday urur goboleedka IGAD, kuwaas oo kulamo la qaatay, madaxweynaha Jubbaland, musharixiinta isdiiwaangeliyay iyo kuwa aan is diiwaangelin, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka iyo xubnaha guddiga doorashooyinka Jubbaland.
Qoraal ka soo baxay shalay guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in wax laga bedelay jadwalka doorashada, iyadoona diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanku ay bilaabanayso moanta oo ay taariikhdu tahay 14- Agoosto.
Dhinaca kalana waxa hadal jeedinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka laga dhigay 15-Agosto doorashada guddoonka 17-Agosto halka hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha ay bilaabanayso 18-Agosto ugu dambeyna doorashada madaxweynaha ay dhaceyso 19-bishaan.